Hatsiakana an-dampihazo :: Kofon’ny fihomehezana ireo mpijery an-dry Etsetra Etsetra sy Barhone • AoRaha
Hatsiakana an-dampihazo Kofon’ny fihomehezana ireo mpijery an-dry Etsetra Etsetra sy Barhone
Etsetra sy i Barhone, tetsy amin’ny CCEsca Antanimena, omaly tolakandro. Toran’ny hehy tanteraka ireo rehetra nanatrika ny lanonana.
Kanto satria nisy niendrika tantara an-tsehatra ny hatsikana sasany nolalaovin’ireto mpanao hatsikana zandriny, izay miezaka mametraka ny anarany eo amin’ny tontolon’ny fampihomehezana ireto.
Nasehon’i Riri sy Aldini, teny an-tsehatra, ny fahaizany mampihomehy amin’ny alalan’ny fakàna endrika sy feon’olona. Niangalian’izy mirahalahy tao tonon-kira amin’ny fomba mahatsikaiky. Nandrasan’ny maro ihany koa ny filalaovan’izy ireo an’i “Zisy sy Lenina”, ramatoabe roa tia mifosafosa sady tsy mahatsiaro ny fahanterany.
Nitsekera ny tantara fahiny, ny fomba malagasy isam-paritra…kosa i Barhone nandritra nandritra “Mitsongoloka”. Feno azy ny sehatra manontolo satria arahiny fihetsika mahatsikaiky avokoa izay tantara lalaoviny. Ankoatra izay, nosarihiny ny maso sy sain’ny mpijery hanaraka izay aloakan’ny vavany.
Raha tarafina tamin’ny kakakaka teny an-toerana, dia nahasarika iray efitrano ny hatsikana niangalian-dry Etsetra Etsetra sy i Barhone. Nitady ny fomba rehetra sady niezaka nitana ny tsiky sy tokelakin’ny mpijery hatramin’ny farany ry zareo. Na tsy feno hipoka aza ny toerana dia afa-po tamin’ny seho ny mpanotrona..
Fifidianana ben’ny tanana sy mpanolotsaina :: Amin’ny 26 septambra no hamoaka ny lisitra ôfisialin’ireo kandidà ny Ceni
Firosoana amin’ireo tetikasa samihafa :: Tsy ho sasa-miandry ny famatsiam-bola avy any ivelany ny Filoha Rajoelina